बागलुङमा सामुहिक बलात्कारको डरलाग्दो घटना : १७ वर्षिया युवतीलाई तीन युवक व्दारा जबरजस्ती करणी ! – ebaglung.com
बागलुङमा सामुहिक बलात्कारको डरलाग्दो घटना : १७ वर्षिया युवतीलाई तीन युवक व्दारा जबरजस्ती करणी !
२०७५ मंसिर २२, शनिबार २१:०१	Top News, थप समाचार
बागलुङ २०७५ मंसिर २२ । महिला हिँशा विरुद्धको सोह्र दिने अभियान जारी रहेकै समयमा बागलुङ नगरपालिका ४ उपल्लाचौरमा तीन जना युवकले एक युवतीलाइ सामुहिक बलात्कार गरेका छन् । बागलुङ नगर क्षेत्रमा भएको सामुहिक बलात्कारको यो डरलाग्दो घटना हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले दिएको जानकारी अनुसार मंसिर २१ गते साँझ उपल्लाचौर बस्ने वर्ष २२ को रामु कुँवर, ऐ बस्ने वर्ष ३३ को सिँगर भनी चिनिने हस्तबहादुर खत्री र ऐ बस्ने वर्ष २२ को साजन भनि चिनिने डेल्चन कार्की समेत तीन जनाले १७ वर्षिया रन्जना (नाम परिबर्तित)लाई अभियुक्त सिँगर हस्तबहादुर कार्कीको घरमा ल्याई जवरजस्ती मादक पदार्थ रक्सी खुवाई रातभर सामुहिक रुपमा जबरजस्ती करणी गरेको सूचनाको आधारमा निजहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर घटनाका सम्वन्धमा थप अनुसन्धान कार्य भैरहेकोे छ ।
पीडित युवती रन्जना (नाम परिवर्तित)संग पीडकहरु तीन जनाको पूर्व चिनजान रहेको आशंका गरिएपनि यस सम्वन्धमा प्रहरीले केहि खुलाएको छैन । तीन जना युवकहरुले कोठामा लगेर जबरजस्ती रक्सी खुवाउदा उनले प्रतिकार गर्नु पर्ने थियो भन्ने चर्चा चलेको छ । पीडित युवती रन्जना (नाम परिवर्तित) को वतन खुल्न आएको छैन ।
तस्वीरमा बागलुङ ढोरपाटन शैक्षिक तथा धार्मिक महोत्सव !
जागरण युवा क्लव, बुर्तिवाङको आयोजनामा रचना वाचन कार्यक्रम सम्पन्न !